Karen Community Association UK: September 2011
မာနယ်စိုးစစ်ဆင်ရေး-ရုပ်သံ အပိုင်း ၁ (youtube အပိုင...
Dear Mr. President of Myanmar (Video)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကို န၀တဥက္ကဌ ရာထူးကနေ ဖယ်ရ...
မိနစ် ၂၀ကြာ တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက်တပ်များ ထိခိုက်...
KNU to Observe One-Day Ceasefire on International ...
ကရင်ပြည်သူများကို EU မှ ကူညီပေးရန် ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီ ပ...
Former Thai MP and Karen defender murdered
Burmese Government's peace offer and Ethnic groups...
အစိုးရတပ် ဂိတ်စခန်း ၃ခုကို DKBA တပြိုင်တည်း ၀င်တို...
ဖလူး စခန်းထိုင် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ စစ်တပ်ကို DKBA ဝင်ေ...
စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ဖို့ ဗြိတိန် ပြည်သူတွေ စာပု...
စစ်တွေဗုံးကွဲ၊ အနည်းဆုံး ၇ ဦးသေ
KIO အစိုးရတပ်ကို ခြုံခိုတိုက်
Protestors in Rangoon mark fourth anniversary of the "Saffron Revolution"
Posted by KCA.UK at 21:040comments
မာနယ်စိုးစစ်ဆင်ရေး-ရုပ်သံ အပိုင်း ၁ (youtube အပိုင်းငယ် ၁.၂.၃.၄.၅)
Posted by KCA.UK at 21:410comments
Posted by KCA.UK at 13:450comments
၁၉၆၂ ခုနှစ်ကကော၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကကော၊ စိတ်တူသဘောတူအာဏာသိမ်းခဲ့ကြတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဘက်မြန်မာ့ တပ်မတော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ အချင်းချင်းကြားမှာတောင်၊ တဦးးနဲ့တဦး သစ္စာမဲ့ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းအထောက် အထားတွေ အများအပြားရှိနေတာကြောင့်၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ် ဘယ်လောက်ယုံ ကြည်ရမလဲဆိုတာ၊ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ သမိုင်းထဲကနေ သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်တဲ့၊ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ကို စစ်ကောင်စီဝင် ကျန်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သစ္စာ ဖေါက်ပြီး၊ ၁၉၉၂ ဧပြီလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ စိတ်တူသဘောတူ ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်အကြောင်း၊ မနှစ်က ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်မှူးဟောင်း ဦးအောင်လင်းထွဋ်နဲ့ ဦးရော်နီညိမ်း တို့ ဆွေးနွေးတင်ပြထားတာကို၊ ဒီသီတင်းပတ် တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကား ကဏ္ဍမှာ ပြန်ပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါ တယ်။
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ အဲဒီအချိန်က အတွင်းရေးမှူး (၂) ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဦးပေါ့နော်၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရဟတ်ယာဉ် ပျက်ကျပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးပေါ့၊ ဘယ်သူ့လူပါလဲ ခင်ဗျ။ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးစောမောင် လူလား။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လူလား ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ စစ်ရုံးမှာရှိတဲ့ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး၊ နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ် ကြီးတင်ဦး ပေါ့လေ။ နောက်တစ်ယောက်က (ဒုတိယ)ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင်သန်း (စစ်ဦးစီးမှူး - ပထမတန်း) G-1 ပေါ့။ အဲဒီအချိန်အခါမှာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးကော၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင် သန်း ကိုကော ကြည့်မရပါဘူး။ ကြည့်မရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလူတွေ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ အင်မတန်မှ closed ဖြစ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ အဲဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော မောင်က “တင်ဦးကို ငါ စစ်ရုံး မှာ မမြင်ချင်ဘူး” ဆို တဲ့အခါကျတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်ဦးက ဘယ်သူမှ ရာထူး မပေးဘဲ နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ကစထမှူး (ထိုအချိန်က တဦးတည်းသော ကစထမှူး) ဆိုပြီးတော့မှ ကရင်ပြည်နယ် ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှ ရှောင်နေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်က ဗိုလ်မှူးကြီးခင်မောင် သန်း (နောင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်သန်း)၊ သူဆိုရင်လည်း စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး (ကက(ကြည်း) စစ်ဆင် ရေးဌာန G-1 ကနေ စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီး(ကြည်း)အဖြစ် ရာထူးတက်ခဲ့ပြီးနောက်) ကနေ၊ “မင်းသွား ခင်မောင် သန်း၊ တပ်မ(၅၅) ဒုတပ်မမှူး” ဆိုပြီးတော့မှ မောင်းထုတ် လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်အခါတုန်းကတော့ ဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့ အထက်က ဦးစီးချုပ်က လုပ်တယ်ဆိုတော့ သူက မကျေနပ်ပေမယ့် ငြိမ်ခံနေရတဲ့ အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ ကျနော် ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုပြောရသလဲ ဆိုတော့ ကျနော်တို့က ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းနည်းပြ အရာရှိပေါ့လေ၊ ဒီ ကကလှမ်း (ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန တပ်မ တော်ထောက်လှမ်းရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး) နဲ့တော့ အမြဲ သွားဟယ်လာဟယ် အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။ ဗိုလ် ချုပ်ကြီး စောမောင်အနားမှာ နေတဲ့ ဗိုလ်မှူးမြင့်ဦးတို့၊ ဗိုလ်မှူး ခင်မောင်စိုး (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်၏ ကိုယ် ရေးအရာရှိများ) တို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ကျနော်တို့ က အမြဲတမ်း ထိတွေ့၊ဆက်ဆံ၊ ပြော ဆိုနေကြတဲ့ အနေအထား မျိုး ရှိပါ တယ်။ ကျနော် ကကလှမ်း ရောက်သွားတဲ့ အခါကျတော့ ပိုသိရပါတယ်။
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်သန်း = “နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ”အဖွဲ့ဝင် အဖြစ်၊ အဆို ပါ စစ်ကောင်စီ စတင်ဖွဲ့စည်းချိန် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးအနေနှင့် ပါ ၀င်လာခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံး ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခုးတိုင်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့၏ စစ်ရေးနှင့် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေး ကို ကွပ်ကဲရသော ကစထ(၃) ၏ ကစထမှူး ဖြစ်ခဲ့သူ။ ၂၀၀၆ တွင် ကစထမှူး ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရပြီး “နိုင်ငံ တော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ”၀င် အဖြစ်မှပါ ၂၀၀၉ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ အနားပေး ဖယ်ရှား ခြင်းခံခဲ့ရသူ)
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ရွေးကောက်ပွဲကို တကယ်ပဲ တရားမျှမျှတတ၊ ရိုးရိုးသားသားနဲ့ လုပ်ပေးမယ်။ ပြီးလို့ ရှိရင် တပ်မတော်ဟာ စစ်တန်းလျားကိုပြန်မယ် ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် အပါအ၀င် အားလုံးမှာ ရှိပါသလား။ သူ တစ်ယောက်ထဲမှာ ရှိတာလား၊ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်” ဟာ၊ (၈၃) ရာခိုင် နှုန်းလောက်နဲ့ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရသွားတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီအနေအထားမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးသန်းရွှေ၊ ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ညွန့်တို့ သုံးယောက် ပတ်လည်ကြားမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လဲ ခင်ဗျ။
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ဟာ တကယ့် ရိုးရိုးသားသား စစ်သားကြီးပါ။ သူ တကယ်ပြောခဲ့တဲ့ စစ်တန်းလျားပြန်မယ်ဆိုတာ အမှန်ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်အနေနဲ့ ကလိမ်ကကျစ် လုပ် ပြီးတော့မှ ပြောတဲ့ အနေအထားမျိုး မရှိပါဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းနေတဲ့ အေဒီလမ်းအရှေ့က အင်းလျား လေးစခန်းဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သနက(၅) (ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း - ၅) တပ်ရင်းက၊ ဒေါက်တာမောင်မောင် ရဲ့သားအငယ်ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်ပေါ့၊ ကိုကျော်သူရဲ့ အငယ်ပေါ့လေ၊ သူနဲ့ ကျနော် အဲဒီမှာ နှစ်လ လောက်ကြာအောင် လုံခြုံရေး လုပ်ရပါတယ်။ int. cover (intelligence cover = ထောက်လှမ်းရေးအရ လုံ ခြုံရေး) ပေးရတဲ့ အနေအထားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ လုံခြုံရေးလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ကော၊ ဗိုလ်မှူးကြီးခင်ညွန့်ကော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း အိမ်ကို မကြာမကြာ အ၀င်အထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက် တခါ ကျနော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေ golf ရိုက်တော့ အနီးကပ်လုံခြုံရေးလိုက်တဲ့ အချိန်အခါမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ချစ်ဆွေ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်ခင် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ဘုန်းမြင့် တို့ လေးယောက် ချက်ချင်းပဲ သူတို့ golf ရိုက်တာကို ရပ်ပြီးတော့၊ သူတို့ golf club ကိုပြန်ပါတယ်။ golf club ရောက် ပြီးတော့မှ ဦးနေ၀င်းရဲ့ကား ယာဉ်တန်း ၀င်လာပါတယ်။ ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်က ဦးနေ၀င်းကို ရန်ကုန်မြို့ မှာ လမ်းမကြီး လေးသွယ် ဖောက်မယ်၊ ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကို ကျူတံထောက်ပြီးတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေက ရှင်းပြ ခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒါ ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းက အဲဒီ အချိန် အခါထိ နောက်ကွယ်မှာ ရှိပါတယ်။
(အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူးကြီး ဦးကျော်သူ (စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် - ၁၃) = ယခု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အဆင့် တူ၊ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ (ယခင် ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ ကျင့်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် နိုင်ငံ ခြားရေး ဒု-၀န်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ၊ ကွယ်လွန်သူ သမ္မတဟောင်း နှင့် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌဟောင်း ဒေါက်တာမောင်မောင် ၏ သားကြီး)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်မောင်ခင် = ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် “နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေး အဖွဲ့”၀င်၊ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)နှင့် ၂၀၀၁ တွင် ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ် အဖြစ်မှ အနားပေး ဖယ် ရှားခံရသူ)
(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဘုန်းမြင့် = ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ်းချိန်တွင် “နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့” ၀င်၊ စစ်ထောက်ချုပ် နှင့် ၁၉၉၇ တွင် ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေး ၀န်ကြီး အဖြစ်မှ အနားပေး ဖယ်ရှား ခံရသူ)
ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်။ ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ခုနက ကိုရော်နီပြောသလို ပြောထားပြီးသား၊ တကယ်လည်း သူက လွှဲပေးမယ် ဖြစ်လာတဲ့အခါ သူ pressure အများကြီး မိပါတယ်။ အပြင်က NLD ရဲ့ pressure တင်မဟုတ်ဘူး ဗျ၊ အထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေရဲ့ pressure လည်း များပါ တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ န၀တအဖွဲ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းကြည်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်အောင်တို့ aggressive ပုဂ္ဂိုလ်တွေချည့်ပဲလေ။ အဲဒီလူတွေက အဲဒီမှာ “ဘာလို့ အာဏာလွှဲပေးရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး တော် တော်များများမှာ ၀င်ပါတယ်။ ဒီလူတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသန်းရွှေနဲ့ နီးစပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။
(ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းကြည် = ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ်းချိန်တွင် “နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေး အဖွဲ့” အဖွဲ့ဝင်၊ အနောက်မြောက်တိုင်း (ယခု အလယ်ပိုင်းတိုင်း) စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့် ၁၉၉၇ တွင် ကုန် သွယ်ရေးဝန်ကြီး အဖြစ်မှ အနားပေး ဖယ်ရှားခံရသူ။ ၂၀၁၀ ဇွန်လတွင် ဗိုလ်ထွန်းကြည် (မုံရွာ) အမည်နှင့် "နှစ် (၅၀) ကျော် ကိုယ်တွေ့များ" ပထမတွဲကို ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သူ)
(ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်အောင် (ကွယ်လွန်) = ၁၉၈၈ အာဏာသိမ်းချိန်တွင် “နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့” ၀င်၊ အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး နှင့် ၁၉၉၇ တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး အဖြစ်မှ အနားပေး ဖယ်ရှားခံရသူ)
ဦးရော်နီညိမ်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အဲဒီအခင်းအကျင်းကို ကျနော်တို့ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့၊ ဒီ န၀တ ထိပ်ဆုံးက ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ အနိုင်ရသွားတဲ့ NLD ကို အာဏာလွှဲမပေးချင်တဲ့ အုပ်စုက တစ်စု၊ နောက်တခါ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ငါတို့က စစ်သား၊ စစ်သားစကား တည်ရမယ်၊ အာဏာလွှဲပေးပြီး တပ်ကို ပြန်မယ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစော မောင်တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်က အဲဒီအချိန်ခါကျ တော့ ခြံနှစ်ခြံ ဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာ ဘယ်ခြံဘက်ကို ခုန်လိုက်သလဲ။
(ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်မောင်တို့ရဲ့ “နုရင်ဘတ် ခုံရုံး” = ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD )မှ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက်၊ ထိုစဉ်က NLD ပါတီဥက္ကဌ တာဝန်ယူထားသည့် ကွယ်လွန်သူ အငြိမ်းစားဗိုလ်မှူး ကြီးကြည်မောင်အား၊ Asiaweek မဂ္ဂဇင်း သတင်းထောက် Dominique Faulder က၊ “ရွေး ကောက်ပွဲ အနိုင်ရ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦး ဆောင်၍ အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးလျှင်၊ မြန်မာ့တပ်မတော် မှ စစ်ခေါင်းဆောင်တချို့အား၊ တရားရုံးတင်ပြီး စစ်ဆေးအပြစ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား” ဟု မေးမြန်းခဲ့ရာ၊ ဦးကြည်မောင်မှ “မြန်မာနိုင်ငံမှာ နုရင်ဘတ် ခုံရုံးလို၊ ရုံးတင်စစ်ဆေးဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး” ဟု ပြန်လည် ဖြေ ကြားခဲ့သော်လည်း၊ ထိုစဉ်က စစ်ခေါင်းဆောင်များမှ၊ NLD မှ သူတို့အား နုရင်ဘတ်ခုံရုံး ကဲ့သို့ ရုံးတင်စစ် ဆေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု၊ တထစ်ချ မှတ်ယူခဲ့ကြသည်။)
Posted by KCA.UK at 09:520comments
မိနစ် ၂၀ကြာ တိုက်ပွဲကြောင့် နှစ်ဖက်တပ်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့
စက်တင်ဘာ ၂၃ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့တောင်ပိုင်းရှိ ဝေါ်လေဒေသ တစ်နေရာတွင် ခြေကုပ်နေရာယူထားသည့် ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များ အား ယမန်နေ့က အစိုးရစစ်တပ်မှ တိုက်ခိုက်ရာ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက် ရေးတပ်မတော်(KNLA) က ပြောသည်။
ဝေါ်လေဒေသ၊ မယ်ကလာ့ချောင်းအနီးရှိ KNLA တပ်ရင်း(၁၀၃)နှင့် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) တပ်ရင်း(၉၀၇)တို့အား အစိုးရစစ်တပ် တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံ ခမရ(၂၀၄) စစ်ကြောင်း(၁)က လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် မိနစ် ၂၀ကြာ ၀င်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာမှ ဒဏ်ရာရသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း KNLA (၁၀၃)တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ် မှူးကြီး စောနေ့စေးက ပြောသည်။
“ဖြစ်တဲ့နေရာက မယ်ကလာ့ချောင်းတံတားအနီး သေ့ဂေထာ့ကုန်းမှာ။ ၃နာရီ ၅မိနစ်အချိန်မှာ အင်အား ၅၀ကျော်ရှိတဲ့ ရန်သူ တပ်က ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့ကို ၀င်တိုက်တယ်။ မိနစ် ၂၀ကြာတယ်။ ဒီကေဘီအေတပ်သား ၁ဦးနဲ့ ကျနော်တို့ဘက်က ၁ဦး ထိ သွားတယ်။ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေထိတော့ မရှိဘူး။ ရန်သူ့ဘက်လည်း ၁ဦးသေ၊ ၁ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့ သိရတယ်။”ဟု အ တည်ပြု ပြောဆိုသည်။
ခမရ(၂၀၄)သည် ကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့အား တိုက်ထုတ်ရန်အတွက် လွန်ခဲ့သည့် ၂ရက်ကတည်းက ၀င်ရောက်နေရာယူထားခဲ့ သလို ရှေ့ဆက်လည်း ကရင်တပ်ဖွဲ့များ လှုပ်ရှားနေသည့်နေရာများကို ရှင်းလင်းရန် အစီအစဉ်ရှိသေးကြောင်း ၎င်းတပ်ရင်းမှူး က ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့် နေရာတွင် အစိုးရတပ် တပ်မ(၂၂)လက်အောက်ခံ ခမရ(၂၀၄)တပ်ရင်း၊ ကေအဲန်အယ်လ်အေ (၁၀၃)တပ်ရင်းနှင့် ဒီကေဘီအေ(၉၀၇)တပ်ရင်းတို့ စစ်ရေးလှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)က ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၁ရက်၊ နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် တရက် တာ တစ်ဖက်သတ် အပစ်အခတ်ရပ်စဲခဲ့သော်လည်း အစိုးရစစ်တပ်ဘက်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ နေ့စဉ်လိုလို ဆက် တိုက် လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။
Posted by KCA.UK at 10:510comments
In 2001 the United Nations General Assembly passed resolution 55/282 designating September 21 as International Day of Peace.
The Karen National Union (KNU), established on democratic principles, has been struggling for peace, democracy and human rights, equality, self-determination and freedom for the entire Karen people.
To demonstrate our commitment to peace, and respect for the United Nations, the KNU will observeaunilateral one-day ceasefire on 21st September 2011.
This is the second successive year we have called suchaceasefire. Last year the SPDC did not reciprocate.
We, the KNU, hereby call on President Thein Sein to also order his Army to cease all military activities on the International Day of Peace.
At the same time, we would like to let President Thein Sein know that while we will respect the International Day of Peace, we reserve the right to defend ourselves and our people. In case of military offensives by Burmese Army or their allies in the KNU areas on this day, the Karen National Liberation Army (KNLA) and Karen National Defense Organization (KNDO) would defend the people with appropriate force.
The KNU has been in armed resistance in order to protect the lives and properties of the Karen and other peoples. It is an organization struggling for the rights to equality, unity, peace, maintenance of culture and customs of all the ethnic nationalities in the country, and establishment ofafuture federal union.
We, the KNU, would like to urge President Thein Sein to cease all offensive actions in the Karen State and KNU areas, and withdraw all its troops from all ethnic states, which would beamajor step towards resolving the political problems and armed conflict.
It is time that the dictatorship stopped all human rights violations such as planned, widespread and systematic unlawful killings, forced labor, looting, destruction of homes and villages, farms, livelihood of the people etc. including the rape of women, as these violations are in contravention of the Geneva Conventions and Rome Statute.
We urge Thein Sein to stop suppression of rights of the Karen people to promote their culture, literature and traditions, the rights to freedom of worship and all forms of discrimination against the Karen people, under its rule.
We request the UN authorities concerned to cooperate with us to stop the Burma Army from recruiting children for its armed forces and, to help and support child soldiers who have escaped from the Burma Army, for the security of their future.
In declaring this one-day ceasefire, the KNU is demonstrating its willingness to solve problems through peaceful political means. We respect the repeated requests of the United Nations Security Council, United Nations General Assembly, and United Nations Secretary General, that there must be dialogue to solve the problems in Burma. We stand ready to enter into genuine dialogue at any time.
In conclusion, we earnestly urge the UN Security Council to persuade President Thein Sein to orderanationwide ceasefire, and engage in tripartite dialogue for the emergence of human rights and democracy, andaguine federal union for lasting peace and security.
For more information contact; Saw D. Tharckabaw +66(0)8-433-28199 / Naw Zipporah Sein +66(0)8-565-11078
Posted by KCA.UK at 00:450comments
Fleeing conflict: internally displaced children (Joseph Allchin)
Posted by KCA.UK at 00:342comments
ကရင်ပြည်သူများကို EU မှ ကူညီပေးရန် ဖလုံ-စဝေါ်ပါတီ ပန်ကြား
စက်တင်ဘာလ ၁၄ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)
Photo-VOA R.Coben (EU commissioner Kristalina Georgieva)
ကရင်ပြည်နယ် ဖာပွန်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးနှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် တောင်ပိုင်းတို့မှ အခက်ခဲဆုံးသော ဒေသများရှိ ပြည်သူများကို ဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)အနေဖြင့် ကူညီပေးစေလိုကြောင်း ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ-PSDP က ပြောကြားလိုက်သည်။
ယခုလ စက်တင်ဘာလ ၉ရက်မှ ၁၀ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည့် အီးယူ ကော်မရှင်နာမင်းကြီး ခရစ်စ်တယ်လီ နာဂျော်ဂျီဗာက အစိုးရခေါင်းဆောင်အချို့နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ပြည်တွင်းရှိ ဒုက္ခရောက်နေသည့် ဒေသများမှ ပြည်သူများကို ယူရို ငွေ ၂၂သန်း ကူညီမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည့် အချက်အပေါ် PSDP ပါတီ၏ဆန္ဒကို ယခုလို ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဒေသများရှိ ပြည်သူများမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်းပြဿနာများ ရင်ဆိုင်နေကြရသည်ဟု ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲတွင် အမတ်နေရာ ၉နေရာ အနိုင်ရခဲ့သည့် PSDP ပါတီ အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ ဖားအံမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အ မတ် နန်းစေအွာက ကေအိုင်စီကို ယခုလို ပြောသည်။
“ကြာအင်းဆိပ်ကြီးနဲ့ ဖာပွန်က တောရွာတွေမှာဆိုရင် အများအားဖြင့် စာသင်ကျောင်းရှိပေမယ့် ဆရာ၊ ဆရာမ မရှိဘူး။ ဆေးပေး ခန်း မရှိဘူး။ ဆေးဆရာ၊ ဆရာမတွေ မရှိဘူး။ အဲဒီဒေသက မြေမြှုပ်မိုင်းထိတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ မြို့ဆေးရုံကို ဆေးလာကုဖို့ လမ်း ခုလတ်မှာပဲ သေတာများတယ်။”ဟု နန်းစေအွာက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ် အခြားဒေသများတွင်လည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဖြင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ကရင်လူမျိုး အများအပြား ရှိသော်လည်း လက်ရှိ အဆိုးဆုံးနေရာများတွင် အမြန်ဆုံး ကူညီရန် လိုအပ်သည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောဆိုသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ဘားမားကန်ပိန်း-UK မှ လှုံ့ဆော်ရေးမှူး နမ့်ဇိုယာဖန်းကမူ အီးယူ၏ လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီပေး မှုကို ကြိုဆိုလိုက်သော်လည်း အီးယူအနေဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းတွင်သာမက နယ်စပ်ဒေသရှိ မြန်မာပြည်သူများကိုလည်း ကူညီရန် ပြောသည်။
၎င်းက “မြန်မာပြည်မှာ တကယ် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။ တကယ်ကူညီရင် ပြည်တွင်းထဲက ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ တွေပဲ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း ဆက်ကူညီဖို့လိုတယ်။”ဟု ပြောဆိုသည်။
အီးယူသည် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများကို ပုံမှန်ပေးနေသည့် အကူအညီများကို ၂၀၁၀ခုနှစ်မှစ၍ လျှော့ချမှုအချို့ကို စတင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုင်း၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိစပ်သော နယ်စပ်ဒေသများတွင် ဒေသခံ ကချင်၊ ကရင်နီ၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှာ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနှင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေ သည့် အခြေအနေကိုလည်း နမ့်ဇိုယာဖန်းက ထောက်ပြသည်။
ဘားမားကန်ပိန်း-ယူကေသည် မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ယခု လောလောဆယ် ကုလသမဂ္ဂ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ်အိုဟေးကင်တားနား အဆိုပြုထားသည့် လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ် ဆေးရေးကော်မရှင်(COI) ပေါ်ပေါက်ရေး ထောက်ခံရန် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများကို စည်းရုံးလှုံ့ဆော်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာအစိုးရသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများနှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြည်တွင်းစစ် အဆုံးသတ်ရေး လုပ်ဆောင်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသည်ဟု စက်တင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပသည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ခရစ်စ်တယ်လီနာဂျော်ဂျီဗာက ပြောခဲ့သေးသည်။
၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာနနဲ့ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေး အပါအ၀င် အခြားအစိုးရ၀န်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံသကဲ့သို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။
Mudered former MP and rights defender Mr Thatkamol Ob-om
By MAHN SAIMON Published: 14 September 2011
Burmese Government's peace offer and Ethnic groups position- ၇ုပ်သံ
Posted by KCA.UK at 12:580comments
အစိုးရတပ် ဂိတ်စခန်း ၃ခုကို DKBA တပြိုင်တည်း ၀င်တိုက်
Thursday, 8 September 2011--KIC
စက်တင်ဘာလ ၈ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကော့ကရိတ်မြို့အနီး မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်၏ ကားလမ်းဂိတ်စခန်း ၃ခုကို တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အ မျိုးသားတပ်မတော်-DKBA က ယမန်နေ့ ညနေ ၁နာရီကျော်အချိန်တွင် ပြောက်ကျားစနစ်ဖြင့် တပြိုင်နက်တည်း ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
အစိုးရစစ်တပ် တပ်မ(၁၂)လက်အောက်ခံ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ(၃၅၅) အခြေစိုက်လျှက်ရှိသည့် ကော့ကရိတ်မြို့နှင့် တစ်မိုင် ကျော်အကွာရှိ ရန်ကုတ်၊ အောက်ဘိုတဲနှင့် သစ်ခြောက်ပင် အစိုးရဂိတ်စခန်းများကို ကလို့ထူးဘောဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ကလို့ထူးဝါး စစ်ဗျူဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကလို့ထူးဘောဗျူဟာမှ ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင်က “ကျနော်တို့ DKBA မရှိတော့ဘူးလို့ အစိုးရ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အ ပေါ် အစိုးရတပ်တွေကို ကျနော်တို့ ဒီလိုတိုက်ပွဲမျိုး ဆင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုက်ပွဲများအတွင်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ၁နာရီခန့် အပြန်အလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီး DKBA က ၎င်းတို့ဘက်တွင် ထိခိုက်ဒဏ် ရာရမှု မရှိသလို အစိုးရတပ်ဘက်တွင် ထိခိုက်မှု ရှိမရှိကိုမူ မသိရှိရကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း DKBA ကလို့ထူးဘောစစ်ဗျူဟာကို စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီဟု DKBA ဘက်မှ ပြော ဆိုခဲ့ပြီးနောက် ယခုတိုက်ပွဲမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲလည်း ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက် ဦးဆောင်သည့် ကလို့ထူးဝါး စစ်ဗျူဟာ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဂိတ်စခန်း ၃ခုမှာ စခန်းတခု လျင် မြန်မာစစ်တပ်အင်အား ၂၀ နှင့် ၃၀ အကြားတွင် ရှိသည်ဟု DKBA က ပြောသည်။
DKBA ကို ပြန်လည်ဖွဲ့ပြီးသည့်နောက် စက်တင်ဘာလ ၆ရက်နေ့က ကရင်ပြည်နယ်၊ လှိုင်းဘွဲမြို့နယ် မြိုင်ကြီးငူရှိ ကရင်နယ် ခြားစောင့်(BGF) တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂၀ကျော်သည် ထိုဒေသတ၀ိုက် လှုပ်ရှားနေသည့် ဗိုလ်မှူးစောဘိ ဦးစီးသော DKBA တပ်ဖွဲ့များထံ သို့ လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ထိုသို့ လာရောက်ပူးပေါင်းသည့် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ ဗိုလ်မှူးစိုးနိုင် ဦးစီးသည့် (၁၀၁၁)တပ်ရင်းနှင့် ဗိုလ်မှူးမောင်ချစ် ဦးစီး သည့် (၁၀၁၄)တပ်ရင်းမှ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်သက် (ယာဘက်)နှင့် သူ၏တပ်မှူး
စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့က ဘားအံမြို့အခြေစိုက် ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ KSDDP က DKBA ကို အသိအမှတ် မပြုတော့ကြောင်း အစိုးရပိုင်သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုထုတ်ပြန်ချက်ကို DKBA က ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း တို့အဖွဲ့ရှိသေးကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် BGF နှင့် အစိုးရတပ်အခြေစိုက်ရာ နေရာကို မကြာသေးခင်က ၀င်ရောက်တိုက် ခိုက်ခဲ့ဖူးသည်။
Posted by KCA.UK at 11:490comments
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ထမ်းခဲ့သော ဖဒို မန်းရှာသည် ၂၀ဝ၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အမည်မသိ သေနတ်သမားများ၏ လုပ်ကြံခြင်း ခံရပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ (Photo: AFP)
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဌာနရဲ့ မှတ်တမ်းတွေကို ဖွင့်ချနေတဲ့ ၀ီကီလီခ် သတင်းတွေထဲမှာ KNU ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုမန်းရှာကို လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်သူတွေထဲမှာ ကွယ်လွန်သူ KNU ဥက္ကဌကြီး စောဗိုလ်မြ ရဲ့သား ဗိုလ်မှူး နာဒါမြ လည်း ပါဝင်ကြောင်း ကောလဟာလ သတင်း ထွက်နေတယ်လို့ စစ်အစိုးရ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိ တဦးကို ကိုးကားပြီး ဒေါက်တာ စောဆိုင်မွန်သာ က အမေရိကန် သံရုံးကို ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဖဒိုမန်းရှာရဲ့ သမီးလည်းဖြစ် အခုအခါ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာအရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Burma Campaign ရဲ့ တာဝန်ခံ တဦးဖြစ်တဲ့ မဇိုရာဖန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 11:070comments
Last year we hadavery successful Karen Cultural event in London and many of you asked about this recently. Good News! The Karen community is pleased to be able to put this cultural event again this year and would like to invite you to join us and enjoy our cultural performance with food.
Time- Food served: 5.30PM to 7PM, Program starts: 7PM to 9PM
Place: St Ethelburga's Centre for Reconciliation and Peace, 78 Bishopsgate, London, EC2N 4AG.
The aims of this event are to raise awareness about the Karen people, our culture, tradition and the situation of Karen people in Burma. At the same time we would like to raise funds for our organisation to continue our activities to help our people back home in Burma.
Karen clothes fashion show
Karen Handicraft, traditional clothes sale
Very exciting Raffle prize will be at the end.
Zoya Phan, author of Little Daughter, will be hosting the event (signed copies will be available for sale).
Normal ticket is 10 pounds per person and solidarity price is 15 pounds per person. Ticket includes free food and soft drinks.
However, the tickets are very limited and selling fast so please book as soon as possible. We really don’t want you to miss this chance.
If you are outside London and can’t make it to the event, but would like to support our work, please do makeadonation. For more information and donation please contact Mary Hla on 0785 328 7330 and Hsa Shee on 0753 304 1963.
For purchasing tickets please contact Hsa Shee on 0753 304 1963 (dae.poe@gmail.com) and May Pearl on 0793 148 7697 (mailmaypearl@gmail.com).
Karen Community Association- London
Posted by KCA.UK at 00:500comments
ဖလူး စခန်းထိုင် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ စစ်တပ်ကို DKBA ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်
ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီမြို့တော်ဘက် ဖလူကြီးကျေးရွာရှိ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ စစ်တပ် အခြေစိုက်စခန်းကို DKBA ၉၀၈ တပ်ရင်းမှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီခန့်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
DKBA ၉၀၈ တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီး တောနော့ဖေါ ဦးစီးတဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ ဝင်ရောက်ခိုက်မှုဟာ နာရီဝက်လောက်ကြာမြင့် ခဲ့ပြီး ထိခိုက်သေဆုံးမှု မသိရှိရသေးဘူးလို့ သိရှိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှု အခြေအနေကို DKBA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး ဆန်းအောင် ဆက်သွယ်ပြောကြားလာတာကတော့..
“မနေ့ညက ကျနော်တို့ ဘက်က ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ စစ်တပ် စခန်းထိုင်တဲ့ ဖလူးကြီး စခန်းကို ဝင်တိုက်တယ်။ ရန်သူ အထိအ ခိုက်တော့ မသိရသေးဘူး ကျနော်တို့ဘက်က အထိအခိုက်မရှိခဲ့ဘူး။ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ အနေနဲ့ လူမျိုးစုဒေသတွေမှာ တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဒေသတွေမှာ အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ တပ်တွေ စစ်ကြောင်းတွေ ဖယ်ပေး ရ ပါမယ်။ အဲဒီလို မဟုတ်ဘဲ တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ စစ်ရေးအရ အသာစီးခြေကုတ်ယူပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်မယ်ဆို တာကတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ဒီလိုအနေအထားတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ် တိုက်ပွဲဝင် နေမှာ ဖြစ်တယ်။ အခုလည်း တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကို ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်တွေပဲ လွှတ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး စကားတွေ ပြောတော့မလိုလိုနဲ့ ခုတော့ ဟိုအဖွဲ့ကို အသိအမှတ်ပြုဘူး ဒီအဖွဲ့က မရှိတော့ဘူး ဆိုတဲ့ အသံတွေ ထွက်လာ ပြန်ပြီ။ ကျနော်တို့ကတော့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် တော်လှန်ရေးတာဝန်ကို ဆက်လုပ်နေရအုံးမှာပဲ” လို့ ပြောပြသွားပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန်ကျင်းကြောင်း သဘောထားပြသတဲ့ အနေနဲ့ ၁၆ နှစ်ကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ DKBA အဖွဲနဲ့ စစ်အစိုးရတပ်တွေဟာ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေခဲ့တာ ၁၀ လနီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် စက် တင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ ဘားအံမြို့ရှိ ကရင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (KSDDP) က စက် တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ DKBA နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီကြေညာ ချက်ထဲမှာ DKBA ကို အသိအမှတ် မပြုကြောင်း DKBA ဆိုတာ မရှိတော့ကြောင်း ပါရှိပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 16:490comments
RFA-2011-08-31 မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စေလွှတ်ရေးကိစ္စ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးဖို့ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးကို ဗြိတိန် ပြည်သူ ငါးထောင် သုံးရာက စာရေးသား တောင်းဆိုလိုက်ကြ ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပို့စကဒ်၊ စာနှင့် လက်မှတ်ပေါင်း ၅၃၀၀ ကို နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနသို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့က Burma Campaign U.K အဖွဲ့ဝင်များ သွားရောက် ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ထောက်ခံကြောင်း ပို့စကဒ်နဲ့ စာတွေ၊ လက်မှတ်တွေကို ဗြိတိန် ပြည်သူတွေထံက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် သြဂုတ်လတွေ အတွင်း Burma Campaign U.K အဖွဲ့က လိုက်လံ ကောက်ခံ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ Burma Campaign U.K အဖွဲ့ဝင် မဇိုယာဖန်းက ပြောပါတယ်။ မြန်မာပြည်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဗြိတိန် ပြည်သူတွေက သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးထံကို ပို့စကပ်နဲ့ စာတွေ ရေးသား ပေးပို့ တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂကတဆင့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ အာဏာရှင် စစ်တပ်က ကျူးလွန်နေတဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်မှုနဲ့ လူသားတွေအပေါ် ကျူးလွန်တဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို အရေးယူပေးဖို့ ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက William Hague ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ရှိဖို့ တကယ်လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုထားတာ ရှိပြီး ဒါကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အတွက် ပြည်သူလူထုက တိုက်တွန်းတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ မဇိုယာဖန်းက အာအက်ဖ်အေကို ပြောပါတယ်။ ရှေ့လာမယ့် အပတ်မှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထား တရပ် ချမှတ်ဖို့ ရှိပြီး၊ အဲဒီ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စေလွှတ်ရေး ကိစ္စ ဗြိတိန် နိုင်ငံက ဦးဆောင် ဆွေးနွေး စေလိုတာကြောင့် ဗြိတိန် ပြည်သူတွေရဲ့ ထောက်ခံစာနဲ့ ပို့စကဒ်တွေကို ဒီကနေ့မှာပဲ ဗြိတိန် နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကို Burma Campaign U.K အဖွဲ့က သွားရောက် ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ EU ဥရောပသမဂ္ဂ အဖွဲ့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သဘောထား တရပ် ချမှတ်ပြီးရင်တော့ လာမယ့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံမှာ တင်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ကုလသမဂ္ဂ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် စေလွှတ်သင့်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကင်တားနား ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
By ဦးကျော်ထင် (VOA)
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ သဲချောင်းကျေးရွာမှာ ဒီကနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းက ဗုံးပေါက်ကွဲတာကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၇ ယောက် သေဆုံးသွားပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြထားပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ်က မွတ်ဆလင်ကျေးရွာ တခုဖြစ်တဲ့ သဲချောင်းရွာမှာ ဒီနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲလောက်က ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်တာကြောင့် ၅ ယောက် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးပြီး ကလေးငယ် ၂ ယောက်က ဆေးရုံရောက်ပြီးမှ သေဆုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံမှာ သေဆုံးတဲ့ ကလေးတွေက မာမတ်ယတ်တာ ခေါ် ချမ်းသာ အသက် ၁၀ နှစ်နဲ့ ယာဇူမူဆာ ၁၃ နှစ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တွေဆေးရုံ တာဝန်ရှိသူ တယောက်က လူနာတွေ ရောက်လာပုံကို အခုလို ပြောပါတယ်။
“ဆေးရုံမှာသေတာ ၂ ယောက်ပါ။ ဒီရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေကလည်း အခြေအနေ မကောင်းတော့ဘူး။ ကျမတို့ကလည်း အတိအကျ မသိရလို့ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာ မပြောနိုင်ဘူး။ ရေထဲမျောလာတဲ့ဟာကို ရွှေထင်ပြီး သွားကိုင်မိလို့ ပေါက်ကွဲတာ ဖြစ်တယ်။”
ညနေပိုင်းမှာတော့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ သေဆုံးတဲ့ အလောင်း ၅ လောင်း ထပ်ပြီး စစ်တွေဆေးရုံကြီးကို ရောက်လာတယ်လို့ ဆေးရုံ အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ဗုံးပေါက်ကွဲမှု အခြေအနေကို သွားရောက် စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်တွေမြို့နယ်မှာ အခုလို ဗုံးပေါက်ကွဲတာ အရင်က မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါဟာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မွတ်ဆလင် ဥပုသ်ရက်လအလွန် နောက်တရက်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲတယ်ဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့လည်း မွတ်ဆလင် အသိုင်းအ၀ိုင်းက ပြောကြပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 00:420comments
အေးလဲ့	| ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၃၇ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ မူဆယ်မြို့နှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့အကြား ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)က အစိုးရတပ်များကို ခြုံခိုတိုက်ပြီးနောက် ဒေသတွင်း လုံခြုံရေး ယူထားသော အစိုးရတပ် အချင်းချင်း မှားယွင်းပစ်ခတ်မှု ဖြစ်သွားသည်။
“တိုက်ပွဲက ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့အဖွဲ့က (၅ မိနစ် - ၁ဝ မိနစ်) ပိုင်းလောက် ခြုံခိုပစ်ပြီး ပြန်သွား
တယ်၊ သူတို့ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က ဟိုအဖွဲ့ ဒီအဖွဲ့ ဆင်းလာပြီး သူတို့ အချင်းချင်းမှားပြီး ပစ်ခတ်ကြတယ်။” ဟု KIO
ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာသော စစ်ထရပ်ကားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ဂျယ်ခေါင် နယ်စပ်ဂိတ်ကို ဖြတ်သန်းရန် သွားနေသည် တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- မဇ္ဈိမ)
မူဆယ်မြို့နှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့ အဝေးပြေးကားလမ်းပေါ်ရှိ နမ့်ဖတ်ကာကျေးရွာ၊ နမ့်ကွတ်နှင့် မန်လွယ်အကြား အခင်းဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
KIO ဘက်မှ အစိုးရ စစ်ယာဉ်တန်းကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်နေသည်မှာ ၁ဝ ကြိမ်ခန့်ရှိပြီဟုလည်း ဆိုသည်။ တရုတ်ဘက် မောင်းနှင်လာသော အစိုးရတပ် ယာဉ်တန်းတွင် စစ်တပ်သုံး ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်လာလေ့ ရှိသည်ဟု သူက ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ ဝယ်ယူထားသော စစ်သုံးယာဉ်များကို ကြယ်ခေါင်-မူဆယ်ဂိတ်မှ တဆင့် မူဆယ် လေယာဉ်ကွင်း
သို့ သယ်ဆောင်ထားပြီး ယာဉ်တန်းပြည့်လျှင် လားရှိုး၊ မန္တလေးဘက်သို့ သယ်ဆောင်သွားလေ့ရှိသည်။
Posted by KCA.UK at 00:390comments